China nkịta na-eme ka ụlọ ọrụ na-eme ka ụlọ dị jụụ | Huanyi
Kụda usoro ikuku nke ihe mgbochi jụrụ.
Igwe ihe na-eme ka mmiri dị mma dị ka gel polymer na mmiri jụrụ oyi maka ụmụ ọhụrụ. Gel polymer nwere nnukwu mmiri nwere ike ịmị ọkụ nke ahụ mmadụ site na mpempe akwụkwọ na ịdabere na nnukwu mmekọrịta na mgbasa nke gel polymer ka ọ wee mepụta nke ọma ikpo ọkụ na-ebufe ma na-ebufe usoro n'etiti okpomoku nke ahụ mmadụ na ihe mkpuchi gel dị ka nke dị n’etiti igwe na-ajụ oyi na ikuku.
L w Ọkpụrụkpụ Ibu ibu
Product aha: Waterproof breathable n'èzí onwe jụrụ na mpe mpe akwa nkịta jụrụ ute
Ihe: esi ihe: naịlọn + ịkwanyere + ụfụfụ ogbo; n'ime ihe: CMC + Ogbo mmiri ụfụfụ + Mmiri dị ọcha.
Arọ: 1700g, ngwaahia
Nha: 50 * 60cm, ngwaahia
Agba: Navy acha anụnụ anụnụ, ngwaahia
Njirimara: Reusable; eco-enyi na enyi; Na-adịghị egbu egbu, Na-abụghị caustic.
Tụkwasịnụ samples oge: 7 ụbọchị ma ọ bụ otú ahụ mgbe iji ike enen; Ndepụta Ngwaahịa ngwaahịa 'sample nwere ike ọnọ mgbe 1-3 ụbọchị.
Ọnọdụ ego: Ex Ọrụ, FOB, CIF, CRR, CIP, DDP, DDU.
Oge ịkwụ ụgwọ: 30% kwụọ ụgwọ tupu oge eruo; 70% kwụọ ụgwọ tupu nnyefe ma ọ bụ na ngosipụta nke oyiri B / LT / T, Paypal
Doro anya: SGS, OA, FDA, iru, ISO9001, BSCI
1. you bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ naanị ụlọ ọrụ?
Anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji mepụta nkịta jụrụ oyi maka afọ 10. Qualitydị mma na ọrụ kacha mma kwesịrị ịtụkwasị gị obi.
2. Kedu ihe kpatara anyị nwere ike iji họrọ gị?
(1). Tụkwasị obi --- anyị bụ ezigbo ụlọ ọrụ, anyị raara onwe anyị nye mmeri
(2). Ọkachamara --- anyị na-enye ngwaahịa ngwaahịa anụ ụlọ ịchọrọ
(3). Factory --- anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ya mere nwee ọnụ ahịa ezi uche na nnyefe ọsọ ọsọ
(4). Ihe Nlereanya --- Ọrụ anyị na-agba mbọ ịnye ihe nlele n'ime awa 24, anyị nwere ike ịnye ihe nlele n'efu
3. Kedu maka ọnụ ahịa mbupu?
Ọ bụrụ na ngwongwo gị abụghị nnukwu, anyị nwere ike izipu gị ngwongwo site na zipu, dịka FEDEX, DHL, anyị kwadoro ha ogologo oge, yabụ anyị nwere ọnụahịa dị mma. Ọ bụrụ na ngwongwo gị buru ibu, anyị ga-ezitere gị site n'oké osimiri, anyị nwere ike ịgụta price gị, ị nwere ike ịhọrọ ma jiri anyị forwarder ma ọ bụ gị.
4. Kedu maka ọnụahịa ahụ? Can nwere ike ime ka ọ dị ọnụ ala?
Ọnụahịa ahụ dabere na ihe ị chọrọ (Ọdịdị, nha, oke)
Tie ihe ogugu mgbe ị natara nkọwa zuru oke nke ihe ịchọrọ.
5. Kedu maka oge nlele? Gini bu ugwo?
Sample oge: 1-5days mgbe iji & samples enen.
T / T 30% nkwụnye ego, nhazi tupu ibupu ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Nke gara aga: mmanya oyi akpa
Osote: Igwe microwave na-ekpo ọkụ Gel Cap
Ngwunye Ngwunye Pet
Jụrụ Dog Bed
Jụrụ oyi akwa n'ihi na nkịta
Pet Bed jụrụ
Pet Jụrụ Gel ute
Pet Jụụ ute
Pet Jụrụ Kedo akwa
Self Jụrụ Pet ute
Self Jụrụ Pet Kedo akwa